Izilwane ze-Alpine: Izilwane zaseSwitzerland, ungatholani? | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | Izindawo zokuvakasha, Ukuphunyuka eYurophu, Iziqondiso
I-Alps iyindawo yemvelo enkulu kunazo zonke eYurophu, kodwa futhi iyindawo yamasiko ebihlala abantu kusukela ezikhathini zangaphambi komlando (namuhla kunabantu abangaba yizigidi eziyi-14 emadolobheni kanye nezivakashi ezingaba yizigidi ezingama-60 unyaka ngamunye). Kepha kuyadingeka ukuthi unake ukuthi ibhalansi yemvelo namasiko entekenteke Ngakho-ke uma ufuna ukuvakashela eSwitzerland ukuyazi noma ukujabulela izilwane zayo ezisezintabeni, akufanele uphazamise izilwane zasendle, ikakhulukazi kusihlwa nasekuseni ngoba yilapho izilwane zidla khona.
Futhi uzodinga ukunakekela imvelo ngokuphelele ukuze izilwane nezemvelo zivikeleke kahle. Kuzofanele usebenzise umqondo ophusile, kepha uma kunesidingo ungathola mayelana nemithethonqubo ethile futhi yamanje yamapaki kazwelonke, iziqiwi nezinye izindawo ezivikelekile ukuze ube nokuziphatha okuhle nokuhloniphayo. Kepha ngemuva kokukutshela konke lokhu, ngithanda ukukhuluma nawe ngesici esisodwa engisithandayo: ngezilwane ezisezintabeni nezilwane ezihlala eSwitzerland.
1 Izilwane nezimbali ze-Alpine
2 Izilwane ze-Alpine izilwane ezincelisayo
2.1 Izinyamazane zeRoe
2.3 Imbuzi yasentabeni
2.7 Amabhere ansundu
3 Izilwane ezivuthayo zezilwane eziphakeme
4 Ingabe zikhona izilwane eziyingozi e-Alps?
4.1 Zimbalwa izilwane
4.2 Ungasondeli kubo
4.3 Izinja ezimhlophe
4.4 Kunamarabi ezinjeni, izimpungushe nasemalulwaneni
4.5 Izinyoka ezinobuthi
4.6 Izilwane ezincane: imikhaza
Izilwane nezimbali ze-Alpine
Ubuwazi ukuthi enye yezinto ezibabazeka kakhulu ngeSwitzerland imvelo yayo, eyenziwe ngezimbali nezilwane ezinkulu zase-alpine? Kunjalo ke, ISwitzerland manje inomgomo wokuvakasha nowezemvelo ukulondoloza izitshalo nezilwane zayo ezingaphandle, ngoba eziningi zalezi zinhlobo zomdabu zisengozini ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu.
Uma ungumthandi wezilwane, uzokujabulela ukwazi ukuthi uma unesibindi sokuhamba izintaba ezindaweni ezithile zasemaphandleni zaseSwitzerland uzokwazi ukuthola izilwane zasendle uma unenhlanhla. Ezinye izibonelo ongazithola yilezi ezilandelayo ngokuqondene nezilwane ezincelisayo.
Izilwane ze-Alpine izilwane ezincelisayo
Izinyamazane ze-roe, uhlobo njengenyamazane encane Ihamba ngokukhululeka emigwaqweni yaseSwitzerland, ngakho-ke kulula ukubona ukuthi sithatha idrayivu yini.
Sizophinda futhi sibe nethuba lokubuka ama-chamois, amanye izilwane ezinobungane kakhulu, efana nensephe futhi ejwayelekile Alps.
Wake wayibona imbuzi yasentabeni iphila futhi iqondile? ESwitzerland kungenzeka ukubabona behamba ikakhulukazi ezindaweni ezineqhwa nezintaba.
Ukuhamba ngezindawo zasemaphandleni zaseSwitzerland kusho ukuhlangana ne- Izimpungushe ezibalekayo. Ubuhle bayo buyamangalisa futhi ngeke bukushiye
Amagundane e-Alpine afana nezimbila, athathwa njengamakhulu kunawo wonke eYurophu, futhi angabonakala ikakhulukazi ngesikhathi inkathi yehlobo.
Ngaphakathi kwezilwane zaseSwitzerland siphinde sithole amahare asheshayo futhi aqhekekile. Yize i-free kuzoba nzima impela ukuzibona ngoba bayashesha futhi besaba kakhulu abantu.
Ungase futhi uhlangane namabhere ansundu amakhulu futhi adlayo, okwakukholakala ukuthi asephelile kusukela ngo-1904, kodwa eminyakeni engaphansi kwengu-5 edlule, kubukeka sengathi baphinde bazalanisa.
Izilwane ezivuthayo zezilwane eziphakeme
Ungathola futhi izinyoni, izinyoni ezibabazekayo ongeke ukwazi ukuzikhohlwa engqondweni yakho. Ezinye zezinto ongazithola yilezi:
Phakathi kwazo singathola izinyoni ezidla inyama ezaziwa ngokuthi izinkozi, ezihlala eziqongweni zezintaba eziphakeme kunazo zonke ezweni. Ngaphandle kokungabaza, ukuzibona zindiza kungumcimbi ngoba amaphiko azo Balinganisa okungenani amamitha ama-2 okungenani.
Phakathi kwezinye izinhlobo ezingabonwa ngokuvakasha nge-ornithological sithola amanqe, amagwababa namagwababa. Ekugcineni sikutshela ukuthi imifula yaseSwitzerland iyikhaya lokudoba njenge-trout futhi izilwane ezinwabuzelayo zingatholakala.
Ingabe zikhona izilwane eziyingozi e-Alps?
Kepha uma ungomunye wabantu abathanda ukuphuma ngomkhondo ukuze bahambe ngezinyawo noma baye ezindaweni ezingagadiwe, kufanele wazi ukuthi kunezilwane ezinkulu ezizingelayo e-Alps. Ezinkulu izidlova kubonakala sengathi zibuyela e-Alps Abantu baseYurophu ngemuva kokuqedwa ngokuphelele ngekhulu le-XNUMX.
Isibonelo, amabhere we-Alps esempumalanga, izimpisi ze-Alps esentshonalanga, ama-lynx ... kepha yize ekhona ababaningi kakhulu ngoba ngokwesibonelo kunezimpisi ezingaphansi kwama-50 namabhere. Kunama-lynx angaphezu kwe-100 asunguliwe futhi ngokujwayelekile azofihla kunoma ngubani.
Kepha noma ngabe izilwane zifuna ukusuka kuwe noma ungaziboni ngoba zicashile, kuyadingeka ukuthi ungazami ukusondela ezilwaneni zasendle (hhayi ezimbuzi zasentabeni, ama-chamois, izimbila, njll.) ngoba ayikhululekile kubo futhi kufanele uhloniphe ukuthi basendaweni yabo yemvelo futhi isivakashi nguwe, hhayi bona. Ungabona izinkomo zasendle futhi kungenzeka zibukeke zihlaba umxhwele kuwe, kepha futhi kufanele ugcine ibanga lakho.
Kunezinja ezimhlophe eziqeqeshelwe ukuvikela imihlambi yezimvu ekuhlaselweni yizinja ezilahlekile noma izimpisi. Kepha izinja ezimhlophe zingaba nolaka impela uma uthatha isinqumo sokuya kumhlambi wezimvu., ngakho-ke kuzodingeka ukwenza ukujika ukuze ubavikele futhi ungazenzi izimvu zitatazele, hlala uzolile futhi ungalokothi usongele inja nganoma iyiphi indlela ngoba ingaba yingozi.
Kunamarabi ezinjeni, izimpungushe nasemalulwaneni
Amarabi akhona ezilwaneni zaseSwitzerland, ikakhulukazi ezinjeni, izimpungushe namalulwane, yize kuyizimo ezingazodwa ngempela. Kepha uma ulunywa yinja kuzofanele ufune usizo lwezokwelapha ngokushesha okukhulu.
Kunezinhlobo ezimbili zezinyoka ezinobuthi e-Alps: izinyoka ze-aspic kanye ne-peliad, ziyabonakala ngama-ellipticals kanye nesimo sawo esiqondile. Kodwa izinyoka bahlasela kuphela uma bezizwa besongelwa noma uma bemangele, ngakho-ke kuzofanele ubukeke kahle lapho unyathela khona ngaphambi kokuhlala phansi noma endaweni enamadwala. Uma ulunywe enye yalezi zinyoka kufanele ufune usizo lwezokwelapha ngokushesha, ngoba yize ingekho ingozi yokufa kwabantu abadala, ubuthi kufanele bukhishwe noma buhlaziywe ngabasebenzi bezokwelapha.
Izilwane ezincane: imikhaza
Kufanele futhi ukhumbule ukuthi kunezinye izilwane ezincane zase-alpine okufanele uzicabangele: imikhaza. Eminye yale imikhaza ithwala izifo ezifana nesifo seLyme (i-borreliosis). Kufanele uhlole umzimba wakho njalo ebusuku ngemuva kokuhamba izintaba futhi uqede noma yikuphi okutholayo. Uma ziluma noma zivutha, kufanele ubone udokotela wakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Izilwane Zase-Alpine: Izilwane ZaseSwitzerland
Ingonyama elele, idilika eziQhingini zaseGalapagos